सम्झनामा नकुल सिलवाल | गोविन्द गिरी प्रेरणा
सम्झनामा नकुल सिलवाल
संस्मरण/स्‍मृति गोविन्द गिरी प्रेरणा June 10, 2016, 1:36 am
समय कति छिटो वित्छ ? नकुल सिलवालले मृत्यु वरण गरेको पनि आज १२ दिन पुगिसकेछ । विस्तारै महिना हुन्छ, वर्ष हुन्छ, दशक हुन्छ । पीडाहरु सेलाउँदै जान्छन् । सवथोक सहज हुन थाल्छ । शायद जीवनको रित नै हो यो ।
मान्छेको जन्म आफ्नो हातमा हुँदैन । कसैले चाहेर जन्मेको छैन यो दुनियाँमा धार्मिक अन्धताको मिथमा वाहेक । मृत्यु पनि आफ्नो हातमा हुँदैन । कसैले चाहेर मृत्यु वरण गर्न पाउँदैन । यदि गरिहालेमा त्यसलाई राम्रो मानिंदैन । कायरताको संज्ञा दिइन्छ, गलत मानिन्छ । तर जजस्ले गलत माने पनि त्यो सच्याउन नसकिने गलत हो, युगौंदेखि यो गलत पनि परम्परा वनिसकेको छ ।
नकुल सिलवालले मृत्यु रोजेको समाचार मुख्य मिडियाहरुका लागि समाचार वनेन । यो वडो असहज लाग्यो । नकुलले आफ्नो जीवनको अधिकाँश समय साहित्यमा लगाएका थिए । छोटो अवधिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हाजिर गरेर तलव खाने सामान्य जागिर छोटो गरे पनि जीवनको अरु समग्र हिस्सा उनले भाषा साहित्यको कर्ममै समर्पण गरे । उनको जागिर, उद्योग धन्दा, पेशा , व्यवसाय जेजे उपमा दिए पनि त्यो नेपाली भाषा र साहित्यसँगै सम्वन्धित थियो । नेपाली भाषा साहित्य नै थियो ।
वगर पत्रिकाको पृष्ठभूमि जे भए पनि र शुरुवातका वर्षहरुमा जसरी थालनी गरे पनि नेपाली भाषाको साहित्यिक पत्रिकाहरुमा सर्वाधिक गहकिला विशेषाँक निकाल्ने श्रेय नकुल सिलवाललाई नै जान्छ ।
स्रष्टाका रुपमा उनका केही थान कविता संग्रह, यौटा कथा सँग्रह र यौटा उपन्यास अनि फूटकर गद्यहरुको सँगालो प्रकाशन भए पनि वगर पत्रिका, वगरका गहकिला विशेषाँकले उनको स्रष्टा व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पा¥यो । त्यसो त उनका केही कविता विशिष्ट छन्, केही कथा जीवन्त छन्, उपन्यास उनले जस्तो विषय र परिवेशलाई लिएर लेखे त्यस्तो उपन्यास पहिला लेखिएको थिएन र पछि पनि लेखिएन । तर वगरका विशेषाँकहरुले उनका सारा रचनालाई सक्दो ओझेलमा पारे ।
आफूले आफ्ना रचना प्रकाशनका लागि प्रयास नगर्ने को होलान् । आफ्ना पुस्तक राम्ररी प्रकाशन होस् , चर्चा परिचर्चा होस् भनेर नचाहने को र कति साहित्यकार होलान् । जो पनि त्यो चाहना राख्दछन् । तर अरुको पुस्तक प्रकाशन गर्ने, ती पुस्तकलाई चर्चा परिचर्चामा ल्याईदिने, सभा समारोह गरिदिने कति हुन्छन् र । जो हुन् तिनलाई सलाम गर्नुपर्छ, ती महान हुन् । नकुल सिलवाल त्यस्तो कुरामा अग्रणी थिए । कतिपय प्रसँग र परिवेशमा म पनि साथमा भएकाले यो म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु । कतिपय आजका सेलिव्रेटी वनेका साहित्यकारहरुलाई शुरुमा चर्चा परिर्चामा ल्याएर रँगमञ्च प्रदान गर्ने काम नकुल सिलवालले गरेका थिए ।
वगर प्रकाशन मार्फत् उनले महेश विक्रम शाहको सिपाहीकी स्वास्नी, कृष्ण जोशीका कविता, मञ्जु काँचुलीका कविता, नव सिलवालका कथा, धच गोतामेका निवन्ध, तारानाथ शर्माका निवन्ध, राजेन्द्र विमलका कथा, नगेन्द्र न्यौपानेका कथा, प्रदीप नेपालको उपन्यास, मोहन वहादुर कायस्थका यात्रा संस्मरण, गोविन्द गोठालेको उपन्यास, मोदनाथ प्रश्रितका रचनाहरु, गोविन्द भट्टका समालोचना, जनकलाल शर्माका प्रवन्ध, प्रमोद प्रधानको नेपाली वाल साहित्यको इतिहास, डा. कविताराम श्रेष्ठको लेख संग्रह, कृष्ण प्रसाद वस्यालको यात्रा संस्मरण, विष्णु वहादुर सिंहको यात्रा संस्मरण, युवराज नयाँघरेका निवन्ध, मनु व्राजाकीका कथाहरु , लोकेन्द्र वहादुर चन्दका कथाहरु, कमल दीक्षितका पुस्तकका भूमिकाहरुको सँगालो लगायत यस लेखकका २ कृति गुडवाई अमेरिका र तेलको धूप नकुल सिलवालले प्रकाशन गरेका थिए । त्यस्तै उनले आजको मान्छेको कथा तथा आजको मान्छेको कथा सिरिजको पनि संयोजन गरेका थिए र पुस्तकाकारमा ल्याएका थिए । त्यस्तै चालिसको दशकको कथा र कथाकार समेत वगरको विशेष अँकका रुपमा प्रकाशन गरेका थिए ।
त्यस्तै उनले गोपालप्रसाद रिमाल सम्मान र वगर सम्मानका नाममा धेरै साहित्यकारलाई टोपी र मालाले सजाएका थिए । त्यसरी सजिन पाउनेहरु खुशीसाथ स्वीकारेर कार्यक्रममा आउँथे ।
नकुल सिलवाल पनि एक सामान्य मानिसजस्तै केही इच्छा आकाँक्षा, केही लोभ, केही मोह भएका व्यक्तिनै थिए । यसमा अपवाद थिएन । उनले चाहेका कुरा पूरा नहुनुले उनलाई निराशामा ढालिदियो र योग साधना गरेर यि सववाट मुक्त हुन चाहे । त्यो सही वा गलत के हो, त्यो विचारणीय कुरा हो । तर उनले जुन वाटो रोजे त्यो वाटोतिर लैजान वाध्य पार्ने समय परिवेश थियो । उनी क्रमसः एक्लिंदै गएका थिए । उनको स्वेच्छाले एक्लिंदै गएको देखिए पनि उनी पक्कै पनि रहरले एक्लिएका थिएनन् । उनी एक्लिन रुचाउने भए उनले त्यतिका प्रकाशन कसरी गर्न सक्थे ? कसरी त्यतिका विशेषाँकको संयोजन गर्न सक्थे ? कसरी त्यतिका सभा समारोहहरु आयोजना गर्न सक्थे ? एक्लोपन रुचाउनेले यी सव गर्न सम्भवै छैन ।
तर प्रश्न यतिखेर एउटै छ, उनका यि सारा देनलाई आँखा चिम्लन मिल्छ ? यि सारा योगदानलाइ उपेक्षा गर्न मिल्छ ? फगत मृत्यु आफैंले रोजे भनेर ? संसारमा धेरै मुलुकका धेरै लेखकहरुले रोजिसकेको वाटो हो यो । यो ठिक हो वेठिक हो, त्यो अलग कुरा हो । तर उनले छाडेर गएका योगदानको पहाड टड्कारो छ । त्यो जीवन्त पहाड ठडिउन्जेल नकुल सिलवाल अक्षरहरुमा वाँचिरहनेछन् ।